SOOMALIDA KU DHAQAN PORTLAND OREGON OO SI HEERSARE AH UGU DABAALGEGTAY KOWDA LUULYO.
Abdallah Mohamed | shariif88@yahoo.com
Hanbeenimadii Salaasada ee bisha july ay hayd kowda ayaa xaflad aad loo soo agaasimay oo loogu dabaal degayey sanadguuradii 43aad ee ka soo wareegatay maalintii ay midoobeen labada gobol ee waqooyi iyo koonfur islamarkaana ay dhalatay dowladii Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Portland ee gobolka Oregon. Xafladaas oo ay soo qabanqaabiyeen ardayda waxka barata Jaamicadaha gobolka Oregon, waxaana ka soo qaybgalay dadwayne kor u dhaafay boqol. Waxaa goobtaas laga saaray calankii buluuga ahaa, waxaa isaguna halkaas joogay oo maaweelinayey dadwaynihii gobtaas isugu yimi fananka da’da yar ee Cawil Bilaajo oo isagu ka soo baqoolay magaalada Seattle ee gobolka Washington si uu uga qaybgalo xafladaas qiima ha leh.
Intii ay xafladu socoday waxaa iyaguna halkaas lagu gudoonsiiyey shahaadooyin ardaydii Soomaaliyeed ee ka qalinjabisay dugsiyada sare ee gobolka Oregon. Guud ahaan jawiga xafladu waxuu ahaa mid aad ka dareemayso qiiro wadanimo iyo farxad dheeraad ah, waxaana indhahaagu qabanayeen hablo iyo inamo da’yar oo xidhan funaanado ay ku sawiran yihiin calanka buluuga ah, kuwo kalena waxay xidhnaayeen dharkii hidaha iyo dhaqanka. Guud ahaana xafladu waxay ahayd mid si aad ah looga soo qayb galay oo aad ku arkaysay ciroole iyo cagyarba.
Maandeeq oo Lagu waraystay Magaalada Portland, ee gobolka Oregon
Sawaxan iyo mashxarad ayaa marqudha hawada isku shareeray markii dadwaynii hii ku sugnaa ay arkeen soo cagadhigashada xidigtii shanta gees lahayd oo iyadu ay galbinayeen midabka bulluga ah iyo codkii macaanaa ee fanaanka da’da yar Cawail Bilaajo. Dadkii oo dhamina way wada staageen iyago oo ay wada qaaday qushuuc wadaninimo, waxaana inankii hayey cod dheereeyaha uu kaga dhawaajey Soomaliyey toos oo, toos oo isku tiirsada eey.
In badan oo dadwaynihii goobta isugu yimi ayaa ilmaynayey. Gabadhan oo in mudo ah joogtay goobta xaflada balse qalbigeedu ku muransanaa in ay iska qaado niqaabkii ay xidhnayd iyo inkale. Inantu waxay soo xidhatay niqaab, waxayna ku dhuumatay daah wayn oo ka danbeeyey golihii tiyatarka ee laga hagayey barnaamijka loogu talay in lagu maa’muuso sanadguuradii sadex iyo afartanaad ee ka soo wareegatay dhalashadeeda. Markii Maandeeq ay wada salaantay dadkii xaflada isugu yimi ayaan u tagay si aan u waraysto waayo ma aanan ogayn wakhtiga ay haysato inta uu le’egyahay madaama ay caawa isu marayso goobo badan oo ku kala yaala daafaha dunida. Waraysigaygiina sidan ayuu u dhacay.
Haatuf: Maandeeq horta Sanadkuuro wanaagsan. Intaas kadib imisa ayaad jirtaa? Maxaase ku keenay goobtan?
Maandeeq: Horta haatufoow waad ku mahadsantahay qadarinta iyo sharafta aad isiisay, hadiise aan u soo noqdo su’aashaadii, anigu waxaan dhashay kowdi luulyo sanadkii 1960 saa’cadu markay ahayd laba iyotobankii habeenimo, qaybta labaad ee su’aashaada waxaan halkan imi dhowr saacadood ka hor, waxaanan isku ha’yey in aan in aan fagaaraha u soo baxo iyo inkale.
Haatuf: Maxaa kugu kalifay in aad dhuumato mar hadiiba aad goobta timi?
Maandeeq: Walaahi haatufoow walaal horta dhowr arimood ayaa sababay in aan dhuunto. Waa ta koobaad e’ orta aniga dhibaato badan ayaa la’iigaystay ilaa iyo markii aan dhashay, markaa waxaan iska hubinayey in meeshu ay amaantahay, iyo in aan lagu hayn wax sharaftayda wax u dhimaya. Talabaadna ee waad ogtahay oo anigu wali gabadh ugub ah ayaan ahay, cid gaydana aan wali helin markaa, sida daqankeena iyo diinteenu ina farayso xishood baa igu yar jiray.
Haatuf: Maxaa kugu qanciyey markaa in aad dibada usoo baxdo oo aad istusto dadkan isugu yimi dhalashadaada?
Maandeeq: Walaahi walaal sidaan horeba kuugu sheegay anugu ma tago goobaha nabadgalyadayda halis galinaya amaba sharaftayda wax u dhimaya, balse markii aan indha indheeyey in mudo ah waxaa iqaaday qiiro wadanimo. Waa marka hore e xaflada waxaa loosoo agaasimay si sharaf leh oo meel walba waxaa ka muuqday midabka buluuga iyo cadaanka ah, waxaase markiiba qiiradayda qaaday fanaankii codka macaanaa oo markiiba ku furay hees aan aad u jecelahay oh “Arligaygoow” walaal marka aan heestan maqlo waxay ii cadaysaa in aan cadaw igu soo dhawaankarin oo goobta aan joogaa ay amaantahay. Talabaadna walaal markaan arkay hablo oyo inamo aad u da’yar oo xidhan sawiradayda aad ayaan u qushuucay oo waan is haynkariwaayey dabadeedna waxaan ogaaday in aan joogo goob ay joogaan dad aad iigu hiloobay, oo ehel ii ah in mudo ahna aanaan is arag.
Haatuf: Maxaad dareentay markii aad ka soo baxday daahii ee aad istaagtay fagaaraha?
Haatufoow walalo, sidaan horeyba kuugu sheegay waxaa daaha iga soo tuuray shucuur iyo qiiro wadanimo iyo hilow iyo jacayl naga dhexeeya dadka goobta isugu yimi, Waxaa indhayga iyo laabtayda qooyay ilmo waayo waxaan dareemay oo xaadayda kiciyey dabaysha macaanayd ee wadanimo waxaanan ogaaday in ay soo dhowdahay waxtigii uu jabi lahaa cadowgayga. Mida kale intii aanan iman xafladan, waxaan soo maray goobo kumaankun kor u dhaafay oo lagu xusayey dhalashadayda, dhamaan goobahaas oo dhana waxaan ka dareemay in sanadkani ka duwanyahay kuwii hore waayo waxaan dareemay in umada Soomaliyeed ay soo fahmayso qiimaha aan ugu fadhiyo oo ay dhawaan hanandoonan nabadgalyadayda, sharaftayda iyo habada aan ka mudanahay.
Haatuf: Kama danbayntii maxaad u soo jeedin lahayd umada Soomaliyeed?
Maandeeq: Marka ugu horaysa waxaan u soo jeedinayaa umada Soomaoliyeed in ay soo ceshedaan sharaftii iyo karaamadii ay lahaayeen isla markaana ay ka qayb qaataan la’dagaalanka cadawga koowaad ee ay umada Soomaliyeed leedahay oo ah qabiilka. Mida labaadna in ay ka shaqeeyaan sidii ay u bari lahaayeen ubadkooda qiimaha aan ku kadhiyo, waayo sidaad ogtahayba geesiyo badan ayaa naftoodii u waayey si ay iiga difaacaan cadawga. Intaas kadibna waxaan ilaahay uga baryayaa in umada Soomaliyeed uu ka dhigo kowo igu faana, kuna noolaada nolol farxad iyo barwaaqo leh isla markaana kula tartama aduunka cilmi iyo caqli.
1da Luulyo iyo Soomaalida Italy
Warbixintii uu Khaalid X. Cali kasoo tebiyey Rooma GUJI...
1da Luulyo iyo Soomaalida NewZealand
Warbixintii uu Maxamuud Daar kasoo tebiyey Wellington Guji...
1da Luulyo iyo Soomalida Pakistan
Warbixintii uu Axmed Ugaas kasoo tebiyey Karachi Guji...